Nezvedu - Rudong Chain Inoshanda
Rudong Chain Inoshandairi muNantong, muPurovhinzi yeJiangsu, padyo neShanghai. Iyo yakasimbiswa mu1971, inogadzira yekubatanidza ngetani, Kuburikidza nekudyara kusingagumi, Rudong ikozvino ine anopfuura mazana mashanu seti yemidziyo, kusanganisira WAFIOS michina inova ndiyo michina yepamberi pasi. Tine huwandu hwakazara hwecheni zvigadzirwa, zvinonyanya kugoverwa muzvikamu zvitanhatu: Yakajairwa simbi yekubatanidza ngetani, Yakakwira tesnile ngetani, Stainless simbi ngetani, Sando ngetani, Knotted ngetani uye Animal maketani, inovhara pamusoro pe400 hukuru uye maratidziro. Iko kugona kwekugadzira kwepagore kuri pamusoro pemakumi matanhatu ezviuru ematani, ichitara yekutanga muAsia uye yechipiri pasirese.
QC ndiyo inogara iri pamberi pedu. Isu tava ISO9001 (2015) yakasimbiswa. Yedu EN818-2 & EN818-7 G80 cheni uye mhando yedhaimani emaketeni echando ari TUV / GS yakasimbiswa. Zvigadzirwa zvedu zvinowanzo shandiswa mumafaira emugungwa ehove, kusunga, kusimudza, anti-skiding uye kushongedza.
Pedyo neimwe yemakungwa makuru eChina, Rudong Chain inoshanda inochengetedza mutengo wemakwikwi. Nenzvimbo yepamusoro yebasa revatengi uye kutonga kwemhando yepamusoro, tinogamuchira kubvunza kwako.
Chiwanikwa Steel paakasimudza Chain, G80 Nokusimudza Chain Grade 80 chiwanikwa Chain, Vachisimudza Chain Machinery Kutakura, G80 chiwanikwa simbi Kutakura Kusimudza chitakuriso Chain, Stainless Simbi Yekutakura Chain YeSewag, Marine Pfupi Batanidza Chain,